SIDA LOO ILAALIYO DABACASAHA BEERTA ILAA GUGA: WAA XAALADO SUURTAGAL AH, XAALADAHA LAGAMA MAARMAANKA AH, IYO SIDOO KALE ALGORITHM TALLAABO TALLAABO AH OO LAGU ILAALINAYO KHUDRADDA DHULKA EE XILLIGA JIILAALKA - KHUDRADDA
Karootada waa dalagga khudradda ah ee dhirta leh, mana aha mid adagtahay in la koro dalag, maadaama ay tahay in la ilaaliyo ilaa guga.
Habka waqtiga-la-baaray ee keydinta khudaarta cagaaran ee beerta ayaa leh tiro muuqaal ah.
Waa maxay waxyaabaha gaarka ah ee farsamada? Wax badan ayaan ku baranaynaa maqaalkeena.
Qaababka asaasiga ah, muhiim u ah kaydinta xilliga qaboobaha
Karootada ayaa ka mid ah kooxda dalagyada xididka leh oo leh naqshad dufan ah oo dusha sare ah (diirka). Muuqaal kale oo dhaqameed waa hanti iwm. Natiijo ahaan, karootada si deg deg ah ayey u jajabisaa. Kaydinta muddada-dheer, waxaa muhiim ah in la abuuro xaalado keeni kara hoos u dhaca uumiga qoyaanka.
Karootiga aan la sifeynin by gobolka dormancy qoto dheer - xididdada ka bilaabi kartaa si Giriigga isla markiiba ka dib goosashada. Si loo hubiyo ilaalinta miraha cusub, waxaa lagama maarmaan ah in heerkulka goobta kaydinta uu hooseeyo. Iyada oo qoyaan kor u kacay ee hoose ee hoose ama xididdada ciiraan koraan, sameynta qadar ballaaran oo ah daaqsinka.
Cunto aan fiicnayn ama mid liidata ayaa la bilaabay inay sii xumaato sababtoo ah qaababka dhismooyinka soo socda.:
Unugyo isku dhafan oo dhuuban (2-3 illaa 5-7).
Heerka hoose ee subnationalization of unugstituted unified.
Hoos u dhigista nafaqooyinka ee halbeegga.
MUHIIM! Haddii qaabdhismeedka uu dhibsado, dalagga xididku wuxuu lumiyaa iska caabida cudurada kala duwan. Si arrintan looga fogaado, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qodo dabacasaha, gooyaa dushooda, ka ilaali dalagga qorraxda iyo qoraalada.
Foosto khafiif ah looma adkeyn karo xitaa dhaxan yar. Haragga maqaarka ka dib marka la diiriyo oo lumiyo casiirka, wuxuu noqonayaa mid caqli leh oo ah bartilmaameed fudud oo loogu talagalay jeermiska cudurada wadnaha. Inta lagu jiro kaydinta, waxaa muhiim ah in heerkulka uusan hoos udhicin 0 (faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heerkulka kaydinta ee dalagga xididka ayaa laga heli karaa halkan).
On our site waxaad ka heli kartaa macluumaad kale oo xiiso leh oo ku saabsan khudaarta cagaaran:
Sida loo qalajiyo foornada, oo lagu badbaadiyo fitamiinada?
Miyuu suurtogal ah in la qaboojiyo xilliga jiilaalka?
Haddii ninkii beerta ka shaqayn waayay meel ku habboon oo looxa saarayo dalagyada asaasiga ah ee jiilaalka, waxaa loo oggol yahay inay ka baxaan dabacasaha beerta. Habkani waa kan ugu da'da weyn, la xaqiijiyay oo la isku hallayn karo. Waxaa lagu talinayaa in laga tago dabacasaha beerta xaaladaha soo socda:
la'aanta wakhtiga nadiifinta dabacasaha;
la'aanta meel bannaan oo ku yaal dhulka hoostiisa ama qolka;
bilawga bilawga ah ee dhaxan (ninkii beerta ka shaqeeyaa ma heli doono wakhti ay ku qodayaan oo ay ka shaqeeyaan dalagga).
Waxaad cuni kartaa khudaarta ka baxsan beerta ee aan ka horeyn bilaha guga. Iyada oo la ilaalinayo qawaaniinta oo dhan, waxaad heli kartaa midho cusub oo casiir leh. Sidoo kale, iyada oo technology technology ee kaydinta, sonkorta accumulates ee dabacasaha - dalagga xidid guga waa xitaa dardar. Dhibaatooyinka tiknoolajiyada ayaa ah waxyeello suurtagal ah in si daacadnimo ah ay ugu timaaddo cayayaanka by cayayaanka, la'aanta helitaanka miraha xilliga qaboobaha, awood u lahayn in ay kala soocaan iyo kala saaro xididada.
Waa maxay noocyadu ku haboon yihiin?
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo dabacasaha beerta, dooro noocyo goos goos ah. Mirahaasi waxay leeyihiin dhadhan kala duwan, waxay yaryar u nugul yihiin sii xumaan iyo hurdo.. Marka xulashada noocyo, waxaa lagula talinayaa in ay dareenka siiyaan:
Vita Long Tilmaam - qaab muuqaal iyo ilaalin tayo sare leh ilaa guga. Iyadoo koritaanka midhihii ma burburin. Miraha waxaa lagu buuxiyaa carotene iyo sonkorta.
Ellestone Qaabka qaabka xididdada ayaa u egyihiin ismaacad siman, dhammaadka taas oo la tilmaamay. Midabku waa hodan huruud.
Boqoradda xilliga dayrta. Habka casriga ah ee casriga ah. Dusha sare waa mid wakhti dheer, dhamaad ah.
Shantane. Miraha gaaban, midab gaaban iyo mid dheer. Jidhku waa qaro weyn yahay, dhadhankiisu waa mid wanaagsan. Waa hagaagaa ilaa xilli xiga.
Xeerka ugu horeeya waa inuu doorto sariirta saxda ah. Dhulka dhulalka la doortay waa inaysan lahayn cuduro, lagama maarmaanka u ah maqnaanshaha caabuqa leh daawo ama wireworm. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in sariirta gu'ga aysan kululayn oo aysan faragalin hawsha hore ee shaqada. Bilaw inaad diyaariso karootada jiilaalka waa inay ahaataa qeybta dambe ee Oktoobar. Wixii ilaalin wanaagsan, dalagyada xididka ah waa in ay u adkeeyaan miraha yar yar ee ciidda iyada oo aan daboolin dheeraad ah.
Diyaarinta khudradda ee kaydinta xilliga qaboobaha wuxuu bilaabmaa bartamaha Sebtembar. Bil ka hor inta aanad ku dhejin dhalada waxaad u baahan tahay inaad joojiso waraabinta. Tani waxay ka hortagi doontaa raasamaalka qoyaanka xad-dhaafka ah ee carrada (dabacasaha ma burburin doono ama leexin doono). Xilliga dayrta, dhammaan caws iyo xidid waa in laga saaraa beerta, sida guga, oo ay weheliyaan karootada, waxaad heli kartaa goosashada haramaha.
Maxaa la sameeyaa xiga?
Iska yaree cagaarka. Si loo fuliyo nidaamka waa lagama maarmaan marka dushooda ay bilaabaan inay huruud noqdaan. Waa muhiim in heerarka sariiraha ay la jaanqaadaan meelaha dalagga ee dabacasaha.
Waxaan kudhicnaa xididada jiifka leh ee ciidada jajab weyn. Cabbirka lakabkiisu waa 3-6 cm, ciidadu waa inay daboolaan sariirta oo keliya, laakiin sidoo kale aagga ayaa ku dhow (qiyaastii 1 m ee goobta). Sand waxaa looga baahan yahay dharka udub dhexaadka ah ee hawada ku jirta.
Ku dabool dabacad. Tani waa in la sameeyaa oo keliya ka hor inta uusan dhaxan.
Lakabka xiga ee xiga waa wax kasta oo la heli karo oo kulaalaya. Ujeedooyinkaas, waxaad qaadan kartaa caleemo qalalan, balka qalalan ama peat.
Daboolka sariirta u baahan yahay alaabta daadinta ama polyetylen - Qalabku wuxuu abuuri doonaa sariir kuleyl ah oo kaa caawin doona in uu khudradda xajisto.
Caawin! Barafku wuxuu ku siin doonaa lakab kale oo ka ilaaliya qabowga. Ka dib dhalaalaya barxadda barafka ayaa heli doona karootada si fiican loo ilaaliyo.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dhigo karootada xilliga jiilaalka dhulka waxaa laga heli karaa halkan.
Akhri siyaabo kale oo lagu keydiyo karootiga:
Talooyin iyo Digniino
U fiirso fiiro gaar ah si aad uga ilaaliso jiirka. Sidaas darteed inta lagu jiro xilliga jiilaalka ma cunaan karootada, laamood (ama qoryaha qoryaha) waa in loo isticmaalaa kululaynta.
Sidoo kale, cirbadaha ama ulaha ayaa lagu kala firdhin karaa lakabka ugu dambeeya. Wixii saameyn ka difaac wanaagsan, celiya gaar ah ama dabaysha sunta ayaa lagu rakibi karaa.: Jiirka ayaan awoodi doonin inuu jebiyo ilaa dabacda beerta.
Qalabka muhiimka ah ee ninkii beerta ka shaqaynayay waa inuu tixgeliyaa nolol shafka ah ee xididada ka dib qoyaan ka soo baxay dhulka guga. Dalagyada rootiga ma laha nolol shaf ah, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay qodaan kahor isticmaalka.
Sidaas, ilaalinta dabacasaha beerta waa hab wax ku ool ah oo la isku hallayn karo leh qaar ka mid ah cilladaha. Qayb yar oo ka mid ah miro ayaa laga yaabaa inuu jeesto ama uu ku dhaco cayayaanka, laakiin buluugga dalagga wuxuu jiifaa ilaa guga iyo wuxuu ku farxi doonaa dhadhanka sare. Xukunka ugu weyn ee guusha waa la'aanta qoyaanka ee ciidda, manjooyin dusha sare iyo rinjiga tayada sare ee dalagyada xididka.